Tahriibayaal Soomaali ah oo laga soo tarxiilay Sucuudiga oo Muqdisho soo gaaray. – Radio Daljir
Luulyo 15, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, July 15 – Tahriibayaal Soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay illaa 165 ruux ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaraha ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo laga soo tarxiilay waddanka boqortooyada Sucuudiga.
Tariibayaashaan ayaa maanta garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa keentay diyaarad xamuul ah oo aad u weyn taasoo gobollo kala duwan oo Sucuudiga ah ka soo aruurisay.
Dadkaan Soomaalida ah oo isku jiray rag iyo dumar ayaa muddooyinkaan dambe ku xirnaa xabsiyada dalka Sucuudiga kaddib markii ciidamada waddankaasi ay qab-qabteen dadkaan oo dhammaantood sharci-darro ku joogay Sucuudiga.
Qaar ka mid ah dadkaasi oo war-fidiyeennada la hadlay ayaa sheegay in ay la kulmeen luro kala duwan muddadii ay xabsiyada ku jireen iyo waliba intii ay dhuumaalaysiga ku joogeen Sucuudigaba.
Ma ahan markii ugu horraysay oo sidaan oo kale Muqdisho ay uga soo degaan dad Soomaali ah oo laga soo tarxiilay dalka boqortooyada Sucuudiga, waxaana inta badan dadkaan la qabtaa inta ay ka gudbayaan xuduudda Yemen iyo Sucuudiga.
Puntland oo laga bilaabay maalmaha caafimaadka dhallaanka iyo munaasabado lagu maamuusayo oo ka dhacay meelo kale duwan.